အ ကျိုးအကြောင်း မသိပဲ လာဆဲရင်တော့ ဆဲတဲ့ သူ အိမ်အထိ ပါးတက်ရိုက်မှာ လို့ ပြောလာ တဲ့ ချမ်းချမ်း – Burmese.asia
Homepage / Celebrity / အ ကျိုးအကြောင်း မသိပဲ လာဆဲရင်တော့ ဆဲတဲ့ သူ အိမ်အထိ ပါးတက်ရိုက်မှာ လို့ ပြောလာ တဲ့ ချမ်းချမ်း
မီဒီ ယာများမကူးယူရ ဒီရက်ပိုင်း ကျမ ကို စည်းလုးံသင့်ပြီ..မြန်မာပြည် သီချင်း ကြည့်ပြီး ဘုမသိဘမသိတ ဆဲ နေတာ အသိတရားလေးတေဝင် အောင်ပြောမှရတာ့မယ် ကျမစပြီးဆိုပေးပါ ဆိုကတည်းက ပါတီဆွဲဆိုမဆိုဘူးပြော ထားပြီးသားပါ ဒီသီချင်းဟာ ပါတီ ဆွဲတွေနဲ့ ပြည်သူတေစိတ်မများရအောင် ကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွက်အမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးမယ့် သီချင်းမို့ဆိုပေးလိုက်တာပါ။
ထမင်းစားရင်နားလည်မှာပါ သီချင်းရိုက်တုန်းကလဲ ကိုယ်ဂီတမာင်နှမတေအားလုးံနဲ့အတူ ဆိုပေးပါဆိုလို့ဆိုပေးတာပဲ ဘာအနှောင်အဖွဲ့မှမပါလို့ဆိုပေးတာ ကျန်တဲ့သူတို့ဘာသာ စိတ်ကူးနဲ့ ဇာတ်လမ်းတေထပ်ထားတာတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူး သိလဲမသိဘူး ကိုယ့်လိပ်ျပာကိုယ်လုံတယ် edit လဲကိုယ်မဆက်တော့မသိဘူး။လာဆဲလို့ ကိုယ်တောင် မကြည့်မိလို့ အပြေးအလွှား ကြည့်ရတာ အရင်တုန်းက election တုန်းကလဲ NLD အတွက် ပဲမယ်ဆွယ်ပေးခဲ့တယ်. အခုလဲ NLD ပဲ အကျိုးအကြာင်းမသိပဲလာဆဲရင်တာ့ ဆောရီးပဲ ဆဲတဲ့သူကို အိမ်အထိပါးတက်ရိုက်မှာ အေးဆေးနေလိုက်တော့။
အခုတခြားပါတီတေ သီချင်းဆိုဖို့ကမ်းလှမ်းလာတယ် ကျမကဒဲ့ပဲမေးတတ်လို့ဒဲ့ပဲပြောပါတယ်. ကျမအခုလက်ရှိဆိုပေးတဲ့ သီချင်းတွေဆိုတာလဲ ဘယ်ဘက်ကိုမှဘက်မလိုက်တဲ့သီချင်းမို့ဆိုပေးတာပါ ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ မဲပေးဖို့ပါပဲ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွက်တကယ်အားကိုးရမယ့်..နိူင်ငံတကာက လေးစားရတဲ့ ကျမတို့ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောခေါင်းဆောင် အနှစ်နှစ် အလလ ပြည်သူအတွက် အချိန်ရောမိသားစုရောစတေးခဲ့ရတဲ့ သူ ကိုယိ့တိုင်းပြည်အတွက် သမိုင်းလှစေမယ့်အလုပ်ကိုပဲလုပ်ကြရအောင်…ကြိုက်သလိုသဘောထားကွဲလွဲနိုင်ပါတယိ. ကျမမိတ်ဆွေ အသိတွေမှာလဲစစ်တပ်အသိတွေအသိုင်းအဝိုင်းအသိတွေရှိပါတယ် မိတ်ဆွေအကန့်နဲ့ခင်မင်တာဖြစ်လို့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မမုန်းပါ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပါတီမဲပေးနိုင်ပါတယ် ကျမကတော့ NLD ပါပဲ။
Previous post အမေရိကန် တိုက်စစ်ကို တရုတ်တို့ ဘာနဲ့ကာမလဲ
Next post တစ်ကိုယ်တော်အခွေထွက်နိုင်ဖို့ အကြွေးအများကြီးတင်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ မေမဒီ